सर्वश्रेष्ठ ध्वनिक सतहहरु,3डी भित्ता प्यानल, ध्वनिक टाइल्स, ध्वनिक अवशोषण प्यानल निर्माताहरु र आपूर्तिकर्ता | भिन्को
पलिएस्टर फाइबर ध्वनिक प्यानल १००% फाइबर बाट बनेको छ, कपास आकार को लागी तातो दबाए पछि। र हामी बिभिन्न तातो प्रेस को उपयोग गर्न को लागी बिभिन्न घनत्व र यकीन छ कि यसको वेंटिलेशन, जो यो उत्कृष्ट ध्वनि अवशोषण र इन्सुलेशन उत्पादनहरु बन्छ सुनिश्चित गर्न को लागी।
उत्पादन को नाम पलिएस्टर फाइबर ध्वनिक प्यानल
सामाग्री १००% उच्च गुणस्तर पलिएस्टर फाइबर
आकार 1220*2440*9/12mm (अन्य मोटाई अनुकूलित गर्न सकिन्छ)
घनत्व १-०-२२ k किग्रा/एम ३
ध्वनि अवशोषित प्रभाव ०.8५
आगो प्रतिरोधी ग्रेड B1
वातावरणीय ग्रेड E1
कोण आकार Chamfer, सीधा
आवेदन स्टुडियो, बालवाडी, सिनेमा, स्टुडियो, आदि।
पलिएस्टर फाइबर ध्वनिक प्यानल छविहरु:
पलिएस्टर फाइबर ध्वनिक प्यानल लाभ:
2) पारिस्थितिकी, गैर गन्ध, सुरक्षा र सफा गर्न सजिलो
3) राम्रो सजावटी प्रभाव, र रंग को ४० भन्दा बढी प्रकार
पलिएस्टर फाइबर ध्वनिक प्यानल आवेदन:
ओपेरा हाउस, फिल्म र टेलिभिजन हल, रेकर्डि stud स्टुडियो, प्रसारण कोठा, टिभी स्टेशन, बहु समारोह हल, सम्मेलन कोठा, कन्सर्ट हल, सभागृह, फुर्सत र मनोरन्जन शहरहरु, होटल, KTV, आदि मा व्यापक रूपमा प्रयोग गरीन्छ।
ढुवानी र प्याकि::
सामान पोलिब्यागमा प्याक हुनेछ
यातायात: समुद्र वा हावा द्वारा
1. पेशा-हामी पेशेवर बिक्री स्टाफ छ। कुनै प्रश्न 24 घण्टा भित्र जवाफ दिइनेछ।
२ मूल्य-किनकि हामी कारखाना हौं, त्यसैले हामी उच्च गुणस्तर र कम मूल्य उत्पादनहरु प्रदान गर्न सक्छौं।
३। सेवा-सजिलो र ढुवानी को लागी सुविधाजनक, हामी समयमै डेलिभरी मिति, र राम्रो बिक्री पछि सेवा को वचन दिन्छौं।
4. टीम-हामी हाम्रो आफ्नै ईन्जिनियरि department् विभाग, तपाइँको दर्जी को लागी तपाइँको उत्पादन को लागी तपाइँको अनुरोध अनुसार छ।
1. हामी धेरै खुसी छौं कि ग्राहक हामीलाई मूल्य र उत्पादनहरु को लागी केहि सुझाव दिनुहोस्।
2. यदि कुनै प्रश्न छ, कृपया हामीलाई ईमेल वा टेलिफोन द्वारा पहिलो मा थाहा दिनुहोस्। हामी समय मा तपाइँको लागी उनीहरु संग सम्झौता गर्न सक्छौं।
1. यदि ग्राहक चीन मा कुनै समय तालिका छ, कृपया हामीलाई थाहा दिनुहोस्। हामी तपाईंलाई होटल बुक गर्न र एयर पोर्ट, वा रेलवे स्टेशन बाट उठाउन मद्दत गर्न चाहन्छौं।
२ कुनै पनी समस्याहरु, कृपया सोध्नको लागी स्वतन्त्र महसुस गर्नुहोस्, र हामी तपाइँलाई आपूर्ति गर्न को लागी सक्दो प्रयास गर्नेछौं!
तपाइँको दयालु जांच को लागी अगाडि हेर्दै
अघिल्लो: ध्वनिक उपचार बास जाल
अर्को: तह विभाजन, तह विभाजन पर्खाल
Q: तपाइँ नमूनाहरु बनाउन कती समय लाग्नेछ?
A. सामान्यतया हामी नमूना बनाउन 1 ~7दिन लाग्नेछ।
प्रश्न: तपाइँको वितरण समय के हो?
A. वितरण को समय 15-25 दिन को भित्र हामी जम्मा प्राप्त पछि ईमानदारीपूर्वक, यो आदेश मात्रा र मौसम तपाइँ अर्डर राख्नुहुन्छ मा निर्भर गर्दछ।
Q: तपाइँ नमूना चार्ज गर्नुहुन्छ?
A.Snandard नमूनाहरु नि: शुल्क छन्, तर अनुकूलित नमूनाहरु उचित लागत संग चार्ज गरिनेछ र भाडा चार्ज गरीन्छ। आदेश पुष्टि भएपछि, हामी एक्सप्रेस शुल्क फिर्ता तिर्नेछौं। कृपया त्यसमा ढुक्क हुनुहोस्।
Q: तपाइँको भुक्तानी को शर्तहरु के हो?
A: भुक्तानी <= 1000USD, १००% अग्रिम। भुक्तानी> = 1000USD, 30% T/T अग्रिम, शिपमेन्ट अघि ब्यालेन्स।
Q: तपाइँ OEM स्वीकार गर्न सक्नुहुन्छ?
A: हो, निर्माता को रूप मा, हामी मोल्ड खोल्न सक्छौ तपाइँको नमूना वा चित्र को अनुसार कुनै ध्वनिक प्यानल उत्पादनहरु उत्पादन गर्न।
यदि तपाइँसँग अधिक प्रश्न छ, कृपया हामीलाई सम्पर्क गर्न नहिचकिचाउनुहोस्, धन्यवाद!
सजावटी3डी भित्ता प्यानल, ध्वनिक soundproof, ...
अवशोषित प्यानल,3डी ध्वनिक प्यानल, मी अवशोषित ...
ध्वनिक प्यानल soundproofing, ध्वनिक पर्खाल तिल ...